Mahereza fa momba antsika Izy
"Mahereza, hianareo vahoaka rehetra, hoy Jehovah, ka miasà; fa Izaho no momba anareo, hoy Jehôvah, Tompon'ny maro. " - Hag. 2:4.
Ny Tompontsika dia mahafantatra ny ady ataon'ny vahoakany amin'izao andro farany izao, amin'ireo irak'i Satana mitambatra amin'ireo olona ratsy izay manao tsinontsinona sy mandà ny famonjena lehibe natao ho azy ireo. Amim-pahatsorana sy amim-pahitsiana lehibe indrindra, no tsy hanafenan'ilay Mpamonjy antsika, dia ilay Jeneraly Tsitohan'ny tafiky ny lanitra, ny amin'ilay ady mivaivay izay hatrehantsika. Asehony ireo loza rehetra mety hitranga, ny toetry ny ady, ary ny asa mafy sy mampidi-doza tsy maintsy hatao. Asandrany ny feony mialoha ny hidirana ao amin'ilay fifanandrinana mba hahatakarantsika ny lanjan'izany, kanefa koa mampahery ny rehetra ary handray ny fiadiana ilaina sy hiandry ny tafiky ny lanitra mba hampitombo isa ireo tafika an'ady ho fiarovana ny fahamarinana sy ny fahitsiana. Hahita hery sy fanampiana mihoatra noho ny herin'olombelona ny fahalemen'izy ireo, ao amin'ny ady mivaivay ho fanatanterahana ny asan'Ilay Mahefa ny zavatra rehetra. Ny faharetana amin'ny finoana sy ny fitokiana tanteraka amin'Andriamanitra no hahatonga ny fahombiazana ho azo antoka.
Rehefa miatrana manoloana azy ireo ny tafiky ny devoly, dia mampirisika azy Izy mba hahery fo sy hatanjaka ary hiady amin-kasahiana, satria manana lanitra hotratrarina izy ireo, ary manana anjely mihoatra ny iray miara-mitolona aminy. Ny Jeneraly maherin'ny tafika rehetra no hitarika ny tafiky ny lanitra. Tahaka ny fotoana nakana an'i Jeriko dia tsy nisy na iray tamin'ny tafik'i Isiraely no afaka nirehareha fa nampiasa ny heriny voafetra mba handrodanana ireo mandan'ny tanana. Ilay Kapitenin'ny tafiky ny Tompo mantsy no nandrafitra ny paik'ady izay natao tamim-pahatsorana indrindra, mba ho ny Tompo irery ihany no homem-boninahitra fa tsy ny olona. Nampanantena ny hery rehefa ho antsika Andriamanitra; ary ny teny fikasana dia ho anao sy ny zanakao, ary ho an'ny olona avy any lavitra rehetra any, marobe araka izay azon'ny Tompo Andriamanitsika antsoina. - SDABC 2:995, 996.
Ny finoana no ilay hery velona izay mandrodana ny fefy rehetra, mihoatra ny sakana rehetra, ary mametraka ny fanevany eo anivon'ny tobin'ny fahavalo. - ST, 14 Aprily 1881.